साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २५ पुष २०७७, शनिबार २०:२७ मा प्रकाशित
साझा प्रकाशनको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा. विजय सुब्बा निर्वाचित भएका छन् । २४ औँ साधारणसभा अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा. सुब्बा निर्वाचित भएका हुन्।
साहित्यकार तथा निवर्तमान सांसद डा. सुब्बा ४१२ मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी डा. जीवनचन्द्र कोइरालाले १८३ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।
सुब्बा र कोइराला प्रकाशनका पूर्वसञ्चालक सदस्य हुन्। विगतमा नेपाल सरकारबाट संस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति गरिन्थ्यो। तर यसपटक साधारण सदस्यहरुबाटै निर्वाचित गरिएको हो। पदाधिकाारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।